Ururada Islaax iyo Damul-jadiid oo maantay shir ay ku yeesheen Moqdisho ku midoobay. – Radio Daljir
Abriil 20, 2013 3:25 g 0
Moqdisho, April, 20 – Munaasibad ay ku midoobayeen ururada Al-islaax iyo Dammul-Jadiid ayaa maanta waxa ay ka dhacday magaalada Muqdisho, ?waxaana ka soo qayb galay masuuliyiinta labadaasi urur iyo waliba masuuliyiinta kale oo ka socday ururada kale ee islaamiga ah ee dalka ka jira.
Labadaan uru ayaa waxaa ay madasha ka sheegeen inay haatan ku midoobeen magicii hore ee Al-islaax, waxayna midawga ururadaan ku dhuwaaqay Shiikh Maxamed Axmed Nuur (Garyare) oo ahaa as-aasihii ururkaasi Al-islaax.
Guddoomiye Garyare oo madashaasi kasoo jeediyay hadal dheer ayaa ku tilmaamay kala jabka ururka khilaaf iyo is-fahan-waa salka ku yaha mabaa?diida uu ku shaqeeyo ururka oo la isku maan dhaafay.
Dhinaca kale, Sheekh Cismaan Axmed oo ah Guddoomiyaha ururka Dammul-jadiid ayaa isna madasha ka caddeeyay in sanadihii? ay kal maqnaayeen ay ahayd wax aad loogu xumaado, waxaana uu hadalkiisa raaciyay in midawga ururka Al-islaax uu yahay faa?iido iyo guul usoo hoyotay ururka Al-islaax.?
Ururkan Al-islaax ayaa la aas aasay sanadii 1978, wixii ka dambeeyay xilligaas ayaa waxaa jiray khilaaf marar badan ururka hareeyay, balse dad badan oo xog?ogaal u ahaa ururkaan Al-islaax ayaa aaminsanaa khilaafyadaasi in ay salka ku yahaan madaxda ururka oo diidanaa is isbadel lagu sameeyo sharuucda xisbigaasi. Taasina ay kaliftay in garab kale uu meesha kasoo baxo, kaasi oo loogu magac-daray Dammul-jadiid, oo micnaheedu yahay dhiigii cusbaa.